‘डान्स इन्डिया डान्स’को शो मा जज बनेका टेरेन्स लुइसले नोराको नि’त’म्बमा हा’नेपछि…. (भिडियो हेर्नुस्) – Sidha Onlinepatra
मुख्य पृष्ठ /Video/‘डान्स इन्डिया डान्स’को शो मा जज बनेका टेरेन्स लुइसले नोराको नि’त’म्बमा हा’नेपछि…. (भिडियो हेर्नुस्)
4,400 1 minute read
उक्त भिडियोमा कार्यक्रमका निर्णायक टेरेन्ट लुइस, नोरा फतेही र गिता कपुरलाई देख्न सकिन्छ। सो कार्यक्रममा जजको रुपमा रहेकी मलाइका अरोरा कोरोना संक्रमित भएपछि केही समयको लागि नोरालाई निर्णायकका रुपमा राखिएको हो । दुई भागका लागि मात्र सम्झौता भएको भएपनि मलाइकालाई अझै थप केही दिन आराम गर्न चिकित्सकले सुझाव दिएका कारण उनी केही दिन नआउने भएकी हुन् । त्यसैले नोराले नै निरन्तरता दिएकी छन् ।**भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला **